Milner Rigoodhe Uu Ka Khasaariyey Oo Liverpool Dhabar-jab Ku Noqday - Wargane News
Home Sports Milner Rigoodhe Uu Ka Khasaariyey Oo Liverpool Dhabar-jab Ku Noqday
Laag rigoodhe ah oo loo dhigay qaybtii dambe ee ciyaarta, balse uu khasaariyey James Milner ayaa Liverpool gayeysiiyey inay dhabar-jab kala soo darso rajadii kamid noqoshada afarta ugu sareeya horyaalka Premier League, iyo barbar dhac gool la’aan ah oo ay ku kala baxaan kooxda Southampton.
Waxay u ahayd galab murugo taageerayaashii ku sugnaa gudaha Anfield. Liverpool fursado teel teel ah iyo marar faro ku tiris ah ayay dhadhan siisay qadhaadhka goolwadaha naadiga lagu naanayso “Awliyada” ee Fraser Forster, Bir garaacistii dhamaadka ciyaarta iyo hirdidii aan dhalan ee Marko Grujic ayaa ugu halis badnaa. Kooxda martida ahayd, iyadu waxay ahayd mid ku fashilantay inay maareyso hal kubad oo halis u muuqaal eg ciyaarta oo dhan.
“Wali horyaalku ma dhamaan – Waa inaanu dhamaantayo u ciyaarnaa sidii nalooga bartay.” Ayaa laga guntay tabobaraha Liverpool – Jurgen Klopp – ciyaarta kadib.
Fursadii ugu qaalisanayd ee kooxda dharka cas soo martaa waxay timid daqiiqadii 66 aad ee ciyaarta, markaas oo loo qabtay rigoodhe kadib laacibka naadiga Southampton ee Jack Stephens markii lagu xukumay inuu gacanta ku taabtay kubaddii uu soo qaaday Lucas.
Milner, oo aan rigoodhe loo dhigay khasaarin horyaalka tan iyo November 2009, kubaddii uu gannay waxaa si fiican uga bed-baadiyey inay shabaqa gaadho goolwade Forster, kaas oo ilbidhiqsiyo ka hor ugu hanjabay xiddiga khadka dhexe inaanu awoodin inuu rigoodhahaas ka dhaliyo, waxaanay u muuqatay inay shaqaysay handadaadaasi .
Dhibicda ay kooxda Klopp ka heshay barbar dhacan, waxay ku tagtay kaalinta saddexaad, kagana kor martay Manchester City, iyadoo heshay 70 dhibcood. si kastabase ha ahaatee, Naadiga macalin Pep Guardiola ayaa haysta ciyaar baaqi ah.
Manchester United waxay ku negaatay shan dhibcood inay ka hooseyso, maadaama ay guuldaro kala kulantay Arsenal, oo iyana laba dhibcood oo kale ka sii hooseysa.